Te Hankalaza Ny Fetin’ny Bilaogy Ve Ianao? Ndao Ary Ho Any Paragoay! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2016 4:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, Magyar, عربي, Español
Sary famantarana ny fetin'ny bilaogy ao Paragoay. Sary nahazoana alàlana avy amin'ny diadelblogpy.com.
Mbola misy ihany ny famoronana votoaty bilaogy raha tsy toy ny tamin'ny taona vitsivitsy lasa izany. Raha ny marina, manome aina indray ny endriky ny soratra an-tserasera ny fitaovana toy ny Medium, ary nampiroborobo ny fivezivezen'ny votoaty bebe kokoa eo amin'ny tambajotra. Na izany aza, marina fa tsy zava-baovao intsony ny bilaogy, ary vitsy ny olona na ny vondron'olona mankalaza ny Andron'ny Bilaogy ankehitriny, izay lasa nankalazaina ara-teknika ny 31 Aogositra.
Nisy ihany anefa vondron'olona mavitrika avy ao Paragoay miezaka ny hamerina indray ny fetin'ny bilaogera, mikasa hanao hetsika mahaliana amin'ny Fetin'ny Bilaogy ao an-tanànan'i Asuncion, renivohitr'i Paragoay. Natao maimaimpoana sy misokatra ho an'ny rehetra ny hetsika mba hifanaraka amin'ny kolontsain'ny bilaogy, ary misy ny fandraisana anjaram-pitenenana maro sy fahafahan'ny mpisera aterineto mifandray sy mifampiresaka ivelan'ny seraseram-pifandraisana.
Manana ny tranonkalany manokana ny hetsika izay mitantara amin'ny antsipirihany ny fivoriana rehetra ao an-toerana mandritra ny tontolo andro hampivelarana ny kolontsaina nomerika ao an-toerana. Toy izao ny fanazavana:
Teraka tamin'ny taona 2010 ny Fetin'ny Bilaogy Paragoay ary isan-taona no atao ilay hetsika ara-kolontsaina nomerika. Toerana [izay] anehoana adihevitra, anolorana ary izarana lohahevitra manodidina ny tontolon'ny bilaogy sy ny tranonkala ara-tsosialy ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana azy sy ny fivoarany.
Etsy an-danin'izany, nisy ny nampiana tamin'ity indray mitoraka ity toy ny:
Fizarana ny fampahalalam-baovao nomerika sy ny tambajotra sosialy amin'ny endrika vaovao, ny fampandrosoana ny blaogy amin'ny fomba fijery manerantany, ny zon'olombelona sy ny Aterineto, ary ny votoaty mankany amin'ny sehatra maro.
Mba hahafantara bebe kokoa momba ity hetsika ity dia nifandray tamin'ny iray amin'ny mpikarakara Osmar Alejandro Cáceres, tonian-dahatsoratra sady bilaogera ao amin'ny Dementesx.com, ny Global Voices.
Global Voices: Manao ahoana ny toeran'ny bilaogy ao Paragoay?
Osmar Cáceres: Na dia mbola tsy misy aza ny tambajotra bilaogy Paragoaiana fotsiny, dia fotoana tsara izao hitrangan'izany. Misy karazany maro ny bilaogy toy: ny teknolojia, ny zon'olombelona, ny tantara, ny kolontsaina ankapobeny, ny fialam-boly, ny literatiora, ny fizahan-tany, ny siansa, ny votoaty malaza be, ny hatsikana an-tsary, ny fifandraisana, ny oniversite, ny fandraharahana, ny lalao video. [Misy mampiantrano manokana ny bilaogy] ao amin'ny sehatra ho amin'izany toy ny Blogspot, Medium, WordPress. Hita ao amin'ny vavahadin-tseraseran'ny gazety nomerika ihany koa ny bilaogy izay ahitana ny zotran-tserasera betsaka indrindra (mamaly voalohany ireo ao amin'ny fitondrana: [Toy] ny Fampahalalam-baovaon'ny Filoha Horacio Cartes)
GV: Ahoana ny fomba hanohanana ara-bola ny hetsika? Mety misy ireo mpankafy mibilaogy hafa ao amin'ny faritra mety ho liana amin'ny teti-panorona ataonareo mba hahatonga izany ho hetsika ho azy ireo manokana :
OC: Ny Andron'ny Bilaogy Paragoay dia vatsian'ny rà, hatsembohana ary famantarana Wifi avy amin'ireo vitsy mino fa afaka manova ny zava-misy ny vaovao sy ny herin'ny hevitra, manova izany amin'ny alalan'ny fitadiavana fomba fijery hafa ilaina ho amin'izany. Tsy misy ny fanohanana ara-bola avy amin'ny fanjakana, ary saimbolika ihany ny fiarahamiasa amin'ny orinasa tsy miankina, ary amin'ny dingana maro dia tsy misy manohana ara-bola ny hetsika (ny famokarana, ny haivarotra, ny mpandahateny, sy ny maro hafa). Na izany aza, dia mbola tsy mampandoa vola izahay idirana aminy. Azo arahana mivantana an-tserasera ihany koa ny hetsika fanao isan- taona tamin'ity taona ity.
Ho an'ireo namana sy bilaogera ao amin'ny faritra, hafatra avy aty Asuncion, Paragoay: Tsy maty ny bilaogy, ary tsy ho faty mihitsy. Mitazona io filazana io ireo izay mitady ny tontolo ara-bolan'ny tontolon'ny bilaogy, saingy mifanohitra amin'izany ny zava-misy. Maro ny toerana tsy miankina no mitoetra, ny sasany mikatona, ny vaovao hafa misokatra. Miteny ho azy ny antontanisa manerantany. Ilaina tokoa ny firaisankina, mivoaka ao amin'ny tontolo iray ikatonantsika mba hihaonana amin'ny namana hafa, hanitatra ny fomba fijery, hitondra izay voatsirambin'ny tànana kely ho fampandrosoana sy fampivoarana ny tontolo nomerika eto Amerika Latina.
Ambonin'izany rehetra izany, tsy maintsy mibilaogy isika, mialà voly, ary zarao hatrany ny kolontsaina nomerika.
Azo arahana ao amin'ny Facebook sy Twitter ny fivoaran'ny hetsika.